भाइटीकाको साइत सार्वजनिक, कति बजे छ उत्तम साइत ? – www.agnijwala.com
भाइटीकाको साइत सार्वजनिक, कति बजे छ उत्तम साइत ?
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा। डा। रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।